Uyithenga njani imvula
Uyithenga njani irockcoat 1. Ilaphu Ngokubanzi kukho iindidi ezi-4 zezinto zerasethi, nganye kuzo inezibonelelo zayo kunye nezinto ezingalunganga, ezinokuthengwa ngokweemeko ezikhoyo. Nika ingqalelo ukwahlula ukuba ngaba ilaphu le-raincoat lisetyenzisiwe kwakhona. Izinto eziphinda zaphinde zenziwa zasebenza ngokukhethekileyo ...
Ungayigcina kanjani imadlana yemvula 1. Iteyiphu yetyesi ukuba imethi yethambeka iyirabha, kufuneka ubeke iimpahla ezisetyenzisiweyo kwindawo epholileyo kwaye engenisa umoya ngoko nangoko emva kokusetyenziswa, kwaye uyomise. Ukuba kukho ukungcola kwi-raincoat yakho, unokubeka imvula yakho kwitafile ethe tyaba, kwaye ukhuhle ngobumnene nge ...
Yintoni omele uyiqwalasele xa uthenga iidyasi zabantwana?
Thina bantu badala sihlala siphethe iambrela xa sisendleleni. Iambrela ayinakho ukwenza umthunzi kuphela, kodwa ikwathintela nemvula. Kulula ukuyiphatha yenye yezinto eziyimfuneko kuhambo lwethu, kodwa ngamanye amaxesha akukho lula kangako ukuba abantwana babambe isambrela. Kuyimfuneko ukuba abantwana banxibe idyasi yemvula ...